Asithulule konke ngaleli Phasika-2016 | News24
Asithulule konke ngaleli Phasika-2016
ABAFUNDI beFEVER bacele ibuya kwingosi esayishicilela ngonyaka odlule eyayikhuluma ngokuthulula konke ngephasika. Yayimi kanje:
SESIFIKILE leso sikhathi sonyaka esinzima ngendlela eyisimanga, ikakhulukazi kubantu abangama kholwa, ngoba yisona sikhathi lapho indodana kaNkulunkulu, uMsindisi uJesu Kristo, afela izono zethu ukuze sisindiswe.
Baqinisile abantu abadala uma bethi izikhathi zamanje azisafani nezakudala, ngisho lokhu ngoba uma ubheka indlela esasiwubungaza ngawo uKhisimusi akusafani namanje, sekwaphela ngisho lesi ‘tayela’ sokuthi ungene kamakhelwane ngamunye udle bese udlulela komunye. Kwakumnandi lokho ngoba kwakukhomba kona ukuthi sesifikile isikhathi sikaKhisimusi.
IPhasika nalo sasilibungaza ngendlela ehlukile futhi ejulile, ngikhumbula ngisakhula ukuthi ugogo waye qinisekisa ukuthi akekho umuntu ozohlala ekhaya uma kuyi Phasika.
IPhasika alusafani nakudala, uthola abantu behleli ngaphansi kwezihlahla bethamele umthunzi bephethe amabodlela anamanzi amponjwane, uthole abantu bechithekile ema tavern, ngalo uLwesihlanu lwapho okwashawa kwabulawa kanzima uJesu ngenxa yezono zethu.
Yazi ukuthi iPhasika luwusuku lwenjabulo kuSathane namadimoni akhe, ngoba kusuke kukhala amakholwa ngenxa yobuhlungu obunzima obenziwa kuJesu.
Ngesikhathi uJesu eshawa ehlukunyezwa bona besuke bekikiza bejabula, ngakho-ke uma nathi senza izinto zenjabulo ngalesikhathi esinzima kangaka- kufana nokuthi sijabula kanye noSathane.
Mfundi we-FEVER, uke unakisise ukuthi ngePhasika yilapho okwenzeka khona izinto ezixakile, uzwe ezindabeni ukuthi kushone abantu engozini yemoto enyantisa igazi.
Lesikhathi sinzima kakhulu ngoba kuningi okubi okwenzekayo, yingakho kuthiwa ngalesikhathi kumele sizile ukudla silindele ukubulawa koMsindisi, sizindle silindele ukuvuka kwakhe. Lesikhathi ngisibona siyithuba esinikezwa uNkulunkulu ukuthi sishintshe indlela esihamba ngayo, uma besenza okubi empilweni, kumele sikuthulule konke kwindodana kaNkulunkulu , ukuze uma ivuka ngosuku lwesithathu, sizalwe kabusha.
Ake sikhuleke ngamandla kuleli Phasika, sinxuse uNkulunkulu ukuthi asithethelele izono zethu.
Incwadi eyingcwele ithi asikho isono esingcono kunesinye, okusho ukuthi noma ngabe untshontshe u-R2 esikhwameni sika mama wakho, noma ubulele umuntu, lokho kokubili kuyisono, ngakho asikho esingcono kunesinye.
Asithulule konke okungaphakathi enhlizweni yethu, konke owawukuvalele esifubeni, ake ukushiyele kuJesu, ngoba nguye kuphela ongakusindisa kulamaketango ogqilazeke kuwona.
Baningi abantu esiphila nabo, kodwa bona bagqilazekile, uthole ukuthi umuntu ugqilazwe isenzo esenzeka empilweni yakhe esakhula, ngenxa yokuthi akalutholanga usizo kulokho okwenzeka, umuntu wakhula nayo lento enhliziweni yakhe, yaphendeuka yaba yinto ewumthwalo kuyena. Okunye okumele sikwenze uma sesikuthululile konke okungaphathi, ukuxola. Ngiyazi ukuthi kunzima kodwa kumele umuntu ngamunye azame ukuyingcenga inhliziyo, ngiyazi ukuthi ngeke kwenzeke nje ngomlingo, kuzo thatha isikhathi, kodwa ekugcineni kuzo kwenzeka ngendlela uNkulumkulu asiyalele ngayo. Mfundi we-FEVER , yikuphi wena othanda ukukuthulula ngaleli Phasika othanda ukuthi udlule kukona uxole uqhubeke nempilo, sithumelele i-sms enombolweni ethi: 074 209 5642 noma ngekheli le-email elithi: nosipho.mkhize@media24.com.
Lesikhathi ngisibona siyithuba esinikezwa uNkulunkulu ukuthi sishintshe indlela esihamba ngayo. uma besenza okubi empilweni, kumele sikuthulule konke kwi ndodana kaNkulunkulu